Zvikonzero Zvishanu: Sei Kugadzira Smart Plugins yeWordpress Uchishandisa AI uye ML? - NewGenApps
chakagadzirwa Intelligence, Content Management System, Machine Learning, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Wordpress
Zvikonzero zvishanu: Sei Uchigadzira Smart plugins yeWordPress Uchishandisa AI neML?
chakagadzirwa Intelligence (AI) uye Machine Learning (ML) vakaferefeta pamwe chete mabhizinesi mazhinji uye vachiona kumhanya kwezvinhu zvitsva maitiro acho angangokwira. Kunyange isu tichigona nguva dzose kutaura nezvekugadziriswa kwesarudzo, predictive analytics, kushandisa michina, vanhu kurasikirwa nemabasa avo kune otomatiki nezvimwewo Pane imwe tekinoroji yatinowanzofuratira munhaurwa dzedu. Iyo tekinoroji iyo masimba 28.7% yeinternet - WordPress. WordPress ndiyo inonyanya kufarirwa content management system iyo inoshandiswa neruzhinji rwemawebhusaiti pane internet. Mamwe emazita akakurumbira anosanganisira Forbes, TechCrunch, LinkedIn, EBay nezvimwewo. Plugin chidimbu che software chinogona kuwedzerwa kuWordPress kune epamberi mashandiro. Kana idzi software dzichishandisa AI neML kuunza ungwaru kuWordPress tinovadaidza smart plugins.
Chii chingaite Smart plug?
Nekushandisa simba reAI neML smart plugins inogona kuunza nhanho nyowani yekushanda muWordPress. Aya mashandiro anogona kusanganisira chero chinhu kubva mukugadzirisa maitiro emabasa kusvika pakuita mushandisi ruzivo. Hedzino 5 nzira dzaungakwidziridze smart plugins kune yako WordPress saiti:
1. Chengetedza Yako Webhusaiti:
Nepo paine akawanda eWordPress chengetedzo plugins kunze uko, chengetedzo ichiri chinonyanya kunetseka kune vashandisi veWordPress. Nekubatsirwa kwe chakagadzirwa njere, kurwisa kwechisimba kunogona kuzivikanwa isati yatombokanganisa saiti. Uyezve, machine learning inogona kubatsira kuona faira rekufungidzira uye malware isati yakanganisa mashandiro esaiti yako kana mhedzisiro yakaipa muGoogle inorambidza saiti yako. Machine pakudzidza inoshandisa dheti rekudzidzisa kuona mapatani mune malware uye inogona kushandisa ruzivo rwunowanikwa kuisa mafaira seakachengeteka kana asina kuchengetedzwa.
Quttera Webhu Malware Scanner chikumbiro chakagadzirwa nechinangwa chakafanana. Iyi plugin inoshandisa gore kadambari kuti utarise maWordPress masaiti uye uwane mafaira anonyumwa kana paine. Inotarisawo kana saiti yakasarudzika neGoogle kana kwete.
Kuzvifananidza ndiko kuri-kudiwa sevhisi nevatengi Nemabhizimusi mazhinji kwazvo pa internet, zvakakosha kuti ubude pamakwikwi ako. Kuita kwako pachako kunogona kusanganisira kushandisa chatbots kugadzirisa kutaurirana uye kuwedzera kutungamira chizvarwa kana nekupa zvemukati zvinonyanya kukosha kumushandisi. Chatbots zvave zvakajairika pane vazhinji Mobile Apps asi ivo havasati vashandiswa kune kwavo kuzere kugona pane iwo mawebhusaiti. Kana akanyatso kuburitswa chatbots anogona kuve akanakisa ekutungamira ekugadzira maturusi anowanikwa kune vashandisi. Iwe unogona zvakare kugadzira zvine hungwaru zvemukati izvo zvinoshanduka pahwaro hwevatengi ehupenyu maficha, jogirafi, maitiro nezvimwe.
WP AI Mubatsiri, plugin yakagadzirwa naLopus, iri kuitawo basa rakafanana. Iyo inopa chaiyo mubatsiri kune vashandisi vako kuti vaite uye kutaurirana navo. Iyi plugin inogona kutungamira vashanyi kuzvigadzirwa zvitsva, kuratidza zvirimo, kuvaraira nezvekutenga kwavo sarudzo nezvimwe.Iyi plugin inosanganisira zviito / kudyidzana kugona uye kudzora pamusoro pemamiriro ezvinhu kuita chiitiko chinotyisa kune vashandisi vako.
3. Kuvandudza CRO:
Conversion Rate Optimization (CRO) inzira yekuwedzera huwandu hwevashanyi vanoshandura kuva vanyoreri, vanyoreri mumitungamiriri uye inotungamira mukushandurwa. Chaizvoizvo, iyo nzira yekuwedzera huwandu hweshanduko mukushambadzira kwepamhepo. CRO inogona kuwedzerwa nekuratidza zvirimo zvirimo, kuwedzera huwandu hwezvipiwa, kugadzirisa dhizaini. Pakati pemaitiro ese eCRO iyo inoshanda zvakanyanya ndeye A / B kuyedza. A / B yokuedzwa ndiyo nzira yekuongorora mbiri (kana kupfuura) dzimwe nzira kuchinetso kuziva iri nani zvichibva pamhedzisiro. Izvi zvinogona kuve zvidiki senge iro bhatani reCTA bhatani kune yakaoma senge zvirimo zvesaiti.
Ipo paine akawanda smart plugins anouya neCTA maficha senge OptinMonster, Sumo, LeadFormly nezvimwe kuchine chiyero chakakura munzvimbo ino. Uchishandisa AI inogona kuzivikanwa kuti ndeupi muvara, dhizaini nezvimwe zvinonzwika nevateereri uye chero CTA nyowani inogona kushandisa iro ruzivo. Panzvimbo pekudzokera kunoyedza nguva dzese iyo algorithm inogona kuyedza maitiro otomatiki uye kurerutsa maitiro eA / B kuyedza nekudaro ichiwedzera mitengo yekutendeuka.
4. Ongorora Mabasa:
From zvakasikwa zvemukati kutsikisa kukwidziridzwa kune zvakawanda zviitiko zvinobatanidzwa mukugadzira zvinotyisa zvemukati. Kunyangwe zvizhinji zveizvi zvisingakwanise kuitwa nemachina (zvirinani izvozvi), kune mamwe mabasa anogona uye anofanirwa kuve otomatiki. Semuenzaniso kunyora meta tsananguro, ma tag emusoro, URL, alt zvinyorwa nezvimwe zvichibva pane akakosha mazwi. (Mune mutauro usinganzwisisike, rakanangana nekiyi kiyi ndiyo musoro wenyaya webhurogu. Iri izwi iro raunoda kurongedzerwa mumhedzisiro yekutsvaga kweGoogle. mune zvakasikwa izvo zvinofanirwa kunge zvoga.
Otomatiki Alternative Textr ndeye smart plug iyo yakabudirira kushandisa imwe yeaya mabasa. Seizvo zita rinoratidzira, iyi WordPress plugin inoshandisa Microsoft's Cognitive Services Computer Vision API kuongorora nyaya yemufananidzo uye nekugadzira zvinyorwa zvinoverengeka zvevanhu zvemufananidzo wako. Kungofanana neat alt zvinyorwa, mamwe marongero-akavakirwa mabasa anogona zvakare kugadziriswa uchishandisa smart plugins muWordPress.
5. Wedzera Engagement:
Kubatanidzwa ndiyo chete nzira yekuona kuti vataridzi vako vanokucherechedza zvechokwadi. Iyo nguva yakashandiswa pane saiti, bounce mwero uye huwandu hwemasangano pamushandisi ese akakosha masosi uye maitiro ehunhu ayo anotsanangura kusangana kwevashandisi newebsite yako. Nehuwandu hwezviri mukati kunze uko zviri kuramba zvichiwedzera kuoma kubata vateereri vako. Apa ndipo panogona kuuya smart plugins. Nekushandisa smart plugins unogona kuongorora maitiro emushandisi pane yako saiti uye nekupa mazano iwo avanonyanya kufunga nezvawo. A injini yekukurudzira (chimwe chinhu chakafanana nemazano eAmazon) chinogona kugadzirwa kuratidza zvirimo kune vashandisi uye zvakanyanya kuwedzera ruzivo rwevashandisi.
Mhuri zvinyorwa mune imwe plugin yakadaro inogona kuita kuti izvi zvive nyore. Iyo inogona nyore kuteedzera maitiro emushandisi uye kukurudzira mazano. Iyo zvakare inosangana isina musono ne Google Analytics kuratidza mhando yezvirimo zvinonyatsodiwa nevashandisi. Injini dzekurudzira dzinogona zvakare kushandiswa kuratidza zvigadzirwa muCommerce kana midhiya munzvimbo dzevaraidzo. Iyo nhanho yehungwaru muma smart plugins inogona kuwedzerwa kusvika padanho rakakura kana iwe ukagadzirisa iwo zvichienderana nezvaunoda uye bhizinesi modhi. Iyo yekukurumidza hunyanzvi uye kusimudzira kwakagadzira chiyero chekuvandudza uye kugadzirisa pamunhu munzvimbo dzese dzinosanganisira WordPress.
chakagadzirwa njere uye machine learning une zvakawanda zvekupa. Izvo hazvisi zvekungochinjisa echinyakare mabasa. Iwo mashandisiro emakesi eAI neML anogona kutangira kubva kumunhu kusvika kune hunyanzvi kusvika kutaurirana. Smart plugins ndeimwe nzira yekuita kuti zvese izvi zviitike. Aya plugins anogona kugadzirirwa chero CMS ingave iri WordPress, Magento, Drupal kana chero imwe sosi yakavhurika content management system. Aya maalgorithms anogona kushandiswa kusanganisa akasiyana masevhisi, kuita mashandiro emabasa kana chero emamwe mashandisirwo akurukurwa pamusoro. Kana iwe uchitsvaga vanogadzira vanogona kugadzira smart plugins kana chero imwe mhinduro yekuchenjera kune rako bhizinesi saka inzwa wakasununguka kutibata nesu.